ေငြအရင္းႏွီးမရွိပဲ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ခု ဘယ္လိုစလုပ္မလဲ..? by popolay.com
ငွေအရင်းနှီးမရှိပဲ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခု ဘယ်လိုစလုပ်မလဲ..?
02 Aug 2019 31,103 Views
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလေးလဲလုပ်ချင်တယ်၊ ငွေအရင်းအနှီးလည်း မရှိလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ငွေကြေးအရင်းအနှီးဆိုတာ ပြောပလောက်အောင် မလိုပဲ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေး တစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံ သိန်း၊ သောင်းချီပြီး ရင်းနှီးမှ အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆက အခုခေတ်မှာ ဟောင်းသွားပါပြီ။ ဒီအယူအဆကြီးကို ဆွဲကိုင်ပြီး ငွေအရင်းအနှီးမရှိလို့ဆိုပြီး လက်မှိုင်ချထိုင်မနေမိအောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ ငွေကြေးအရင်းအနှီး ပြောပလောက်အောင် မလိုပဲ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး အသေးလေးတစ်ခု စတင်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိလာပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ ငွေအရင်းအနှီးမလိုပဲ လုပ်ကိုင်လို့ရတဲ့ စီပွားဖြစ်လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် လုပ်ငန်းလေးတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရုပ်သံမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦး။